Veterans Zuva Dambudziko reApple Tarisa | Ndinobva mac
Ichi ndicho chiitiko chinonetsa cheApple Watch iyo Apple inotarisa zvakanyanya paVeterans muUnited States. Haisi zuva rinopembererwa pasirese uye ndosaka riri renyika yeNorth America chete.
Iri dambudziko rave richiitika kwenguva yakareba uye ndere ita chero rudzi rwekudzidziswa kwemaminitsi gumi nerimwe kana kupfuura neMuvhuro, Mbudzi 11, rinova Zuva reVeterans. Pasina kupokana, iyi inzira yakanaka yekukurudzira kufamba kwematambudziko eApple Watch uye mune iyi nyaya haina kunyanyo kumanikidza kuti munhu wese aedze kuwana menduru.
Vese vashandisi vane Apple Watch uye vanogara muUnited States vanogona kuita chiitiko ichi chavanowana matikiti ekushandisa muMessage application uye menduru dzeAction app. Mune ino kesi ivo vari zvakafanana neyavakapa gore rapfuura maererano nekugadzirwa. Chiitiko ichi chichaonekwa kubva munaNovember 9 anotevera uye musi wa11 uchava musi uyo chinetso ichi chingakwaniswe.
Nezve zvinetswa zvezviitiko zvevamwe vese vashandisi veApple Watch, hapana zvitsva zvinotarisirwa (zvirinani kwenguva pfupi) zvegore rino uye mamwe maNational Parks akaitwa muna Nyamavhuvhu 25 uye ndiko kwakave kwekupedzisira. Zvino kwekutanga kwe2020 zvinotarisirwa kuti "Tanga gore nerutsoka rwerudyi" kuti isu tichaona pamwe mumwedzi waNdira, kusvika panguva iyoyo zvinoita sekunge tichave nemamwe matambudziko
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Veterans Zuva Dambudziko reApple Watch